Iikheyibhile zeekheyibhile kunye nezihlanganisi
Izixhobo ezantsi zeVoltage yeABC
I-Lug engagqitywanga ngaphambili kunye nomkhono
Fibre Umthambo Cable eyongezwayo
Umgca oPhezulu ulungisa
Iron Line Lokulinganisa
Izibopho zeVoltage eziPhakathi
Izixhobo ezenziwe kwangaphambili
Ubushushu Shrinkable Kwaye Silicon ngerabha eyongezwayo
Ubushushu Shrinkable eyongezwayo
Izixhobo zeRubber zeSilicon
Ukubanjwa kombane, ukusika iFuse kunye ne-Insulator
Izixhobo zeWiring kunye neeTheminali
Uyilo lwentambo yetrunk-eyenziwe lula yitrunk luyenza lula ufakelo kwaye luyanciphisa iindleko ngokubanzi
Kwiminyaka yakutshanje, ibango lamandla elanga likhule njengenye indlela eluhlaza kwimveliso yombane esekwe kumafosili, kunye nentsingiselo yezixhobo zokuvelisa amandla elanga ibisoloko isiya kwiinkqubo ezinendawo ebanzi kunye nomthamo omkhulu wemveliso. Nangona kunjalo, njengendawo yokusebenza ...
I-icon enkulu yesitokhwe: kweyona moto intle kwimbali ye-NHRA [kunye ne-Chevrolet]!
UDan Fletcher (UDan Fletcher) ngomnye wabantu abathathu kuphela kwimbali yokubaleka. Uphumelele ngaphezulu kwe-100 le-NHRA, embeka phambili kwiintsomi ezininzi kwezemidlalo, kwaye ekhuphisana noJohn Force noFrank Manzo (uFrank Manzo) baba yiklabhu ekhethekileyo. Ikwanguye yedwa otshayileyo ...
Abadlali abaphambili abaphezulu kuhlalutyo olunzulu lwentambo kunye nentengiso yokunxibelelana kwinqanaba lehlabathi.
Uhlalutyo lophando lwentengiso kunye nentambo lubonelela ngovavanyo olupheleleyo lwentambo kunye nentengiso yezihlanganisi, ezibandakanya iinyani, ulwazi olunengqiqo, idatha yezembali, kunye neenkcukacha zorhwebo ezixhaswe ngokwezibalo. Intambo kunye noqhagamshelo kwimarike yohlalutyo nayo ...
Yintoni iGrip-End Grip?
Umtya wokuphela kohlobo luhlobo lweepali zentsimbi eziqhagamshela kwimithambo yamehlo kwimigca yeepali kunye nakwimigca yonxibelelwano. Banoyilo oluthile oluvumela ukuhanjiswa kwi-eriyali, kwimigca yokuhambisa, kwimigca yokunxibelelana, nakwezinye izakhiwo zabafana. Izinto ezisetyenziswa ngabavelisi kwi ...
Uxinzelelo lobambiswano lolunye uhlobo lwezixhobo zentsimbi ye-tension eyodwa, isetyenziswa ikakhulu kwimigca yokuhambisa ngaphezulu okanye kwimigca yokuhambisa. Uqinisa uxinzelelo ikwabizwa ngokuba kukugqibela kobunzima bokuqinisa okanye uqiniseko lwe-quadrant, lolunye uhlobo lokuhambisa umgca ombane. Kuba imilo yeshumi ...
Ukumiswa uqinisa ubizwa ngokuba uqinisa ukunqunyanyiswa okanye ukunqunyanyiswa efanelekileyo. Ngokutsho kwesicelo, Ukurhoxiswa uqinisa kubandakanya ukumiswa uqinisa intambo ye-ABC, ukunqunyanyiswa uqinisa intambo ye-ADSS, ukunqunyanyiswa okubamba komgca ongaphezulu. Ukumiswa uqinisa kukuthetha ngokubanzi kuzo zonke iintlobo uqinisa whi ...
Socket Clevis: Isikhokelo sokuGqibela sabangenisi
Yintoni iSocket Clevis? Isocket clevis ikwabizwa ngokuba lulwimi olusisiseko yinto ebaluleke kakhulu kubuchwephesha bomgca wepali. Ihlala isetyenziswa kwimigca ephezulu, kwimigca yokuhambisa, nakwimigca yamandla. Lelona candelo likhulu kwizixhobo zomqobo wepali ezihlala zidibanisa uhlobo lwesocket insulato ...
Yintoni uGuy Thimble wePole Line Hardware
I-Guy thimble sisixhobo seepali esenzelwe ukusetyenziswa kwiibhendi zepali. Basebenza njengonxibelelwano olusetyenziselwa ukunxibelelana nocingo lomfo okanye ukubamba komntu. Oku kuqhelekile kwimigca yesiphelo seepali kunye neendlela zombane. Ngaphandle kokusetyenziswa okukhankanywe apha ngasentla, i-thimble yomntu idibanisa uxinzelelo lwe-tension ukukhusela ...
Isaziso sokuphinda sisebenzise iYONGJIU.
ngomphathi ku 20-03-23
YONGJIU AMBANE AMANDLA UKULUNGISWA CO., LTD iye yaqalisa imveliso eqhelekileyo. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba unayo nayiphi na imfuneko malunga nemveliso yethu ngolu hlobo lulandelayo.
OKO KUFUNEKA UKWAZI NGOKUTHINTELWA KWEENOVELI ZESIFO SECORONAVIRUS (COVID-19)
Kukho ukugqabhuka kwentsholongwane ye-corona okwangoku. Intsholongwane inokuthi isasazeke ngokukhohlela, ukuthimla okanye ukudibana namathe. Le ndlela ilandelayo iyimfuneko ngexesha lobhubhane Nceda uzame ukunciphisa imisebenzi yangaphandle nangoko ...
Isikhokelo sokufakwa kwesinxibelelanisi sokugqobhoza
Isinxibelelanisi sokubhoboza i-Insulation (IPC) sisetyenziselwa ukuqhagamshela intambo yombane ephantsi ene-voltage ephantsi okanye i-low-voltage i-cable efakwe kwi-cable (ithusi lobhedu okanye i-aluminium cable) ngaphandle kokuhlutha ukufakwa kwentambo. Singafunda indlela elula yokufaka kulo mfanekiso ulandelayo.
Umnxeba: +86 577 6178 7888
Ifowuni / iWhatsapp: +86 18057751088
Idilesi: Indawo yeJiaxi yezeMizi-mveliso, iLiushi Idolophu, iSixeko saseYueqing, kwiPhondo laseZhejiang, China
Cable uqinisa, Cable uqinisa, Ucingo uqinisa, Aluminium Cable uqinisa, Aluminium Electric uqinisa, Iilgi zombane,